Abavelisi bePolycrystalline kunye nabaXhasi | Umzi mveliso we China Polycrystalline
Iphaneli yam SOLAR P2 Poly Solar PV 150w 155watt 160wp 165 Watt 170 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-17.1%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya Iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli ...
Iphaneli yam SOLAR P3 yePol Solar PV yePaneli 160w 165watt 170wp 175 Watt 180 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu kokusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-17.65%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza kokuKhanya okuPhantsi Iglasi ephezulu kunye nesicatshulwa somgangatho weseli ...
Iphaneli yam SOLAR P3 Poly Solar PV 215w 220watt 225wp 230 Watt 235 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-17.5%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya Iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli ...
IPaneli yeSOLAR P3 yePol Solar PV yePaneli 250w 255watt 260wp 265 Watt 270 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu kokusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula (ukuya kuthi ga kwi-18%) isibonelelo sobuchwephesha obuPhucukileyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya Iglasi ephezulu kunye nokuthungwa komphezulu weseli ...
Iphaneli yam SOLAR P3 Poly Solar PV 280w 285watt 290wp 295 Watt 300 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-18.01%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza kokuKhanya okuPhantsi Iglasi ephezulu kunye nesicatshulwa somgangatho weseli ...
IPaneli yeSOLAR P3 yePol Solar PV yePaneli335w 340watt 345wp 350 Watt 355 w iPerc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu kokusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula (ukuya kuthi ga kwi-17.93%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya kweglasi ephezulu kunye nombhalo we-texturin ...